Gabdhaha dabaysha jabiya WW-7
Qaabka Maya.: WW-7
Midabka: Caddaan / Casaan
Dhar: Shell: 100% polyester dhar tolmo leh; Dahaadhka: 210T taffeta
Siyaada: jiinyeer nylon, cajalad leh tolmo wanaagsan oo labada dhinac lacag ah
Faallooyin: Dhammaan daabacaadda dharka qolofta jirka, Cajalad ku duuban oo labada dhinacba lacag ku leh gacmaha raglan, Feedh Flat-ka ah oo qoorta ku dhegan
Gabdhaha dabaysha jabiya WW-3
Qaabka No.: WW-3 Midab: Navy / Pink / Range Cabbirka Cad: 4-12A Fabric: Shell: 100% polyester shining dhar tolmo wanaagsan leh; Dahaarka: 210T taffeta Qalabka: Jiinyeer Nylon, Erayada Laastikada: Guddi ka duwan midabka jirka iyo gacanta hore
Gabdhaha dabaysha jabiya WW-1
Qaabka No.: WW-1 Midab: Ranjitiga Xajmiga / Caddaanka: 4-12A Fabric: Shell: 100% polyester dhar tolmo wanaagsan; Dahaarka: 210T taffeta Qalabka: Jiinyeer Nylon, Xarig tuubbooyin, Xadhig Elastic: Gacmo Raglan oo leh 3 midab oo guddi ah
Dharka dhogorta ee gabadha TU-01
Qaabka No.: TU-01 Midabka: Caddadka Caddadka Cawl: 1-5A Dhar: Shell: 100% dhogor bakayle polyester ah; Dahaarka: 210T taffeta; Buuxinta: Polyester qulqul faashad 120g Kaabis ah: jiinyeer caag ah, luul, muuqaalka laastikada ah
Gabdhaha Ciyaaraha Dabaysha / WW-2
Qalab: Shell: 100% polyester dhar tolmo leh; Dahaarka: 210T taffeta Faallooyin: Cajalad hufan oo daabac dhibic leh oo gacmaha raglan ah Jaakad isboorti oo jilicsan oo jilicsan oo midabkeedu ka duwan yahay ayaa ka samaysan jilicsanaan jilicsan, cusub oo raaxo leh, oo ah qalab maaddooyin aan dabeyl lahayn. Hoodie waa fududahay laakiin waxaa ka buuxa wax ku ool ah oo casri ah; xirmooyinka laastikada ah iyo cidhifka, ma aha oo kaliya muuqaal quruxsan oo raaxo leh, laakiin sidoo kale waxay bixiyaan shaqeyn hawo la'aan ah. Farqiga u dhexeeya midabada dhalaalaya iyo kuwa madow iyo th ...